Ilhaan Cumar: "Gabdhaha waxay dhihi doonaan xijaabkeyga wax haka sheegina" - BBC News Somali
Wareysi gaar ah oo ay siisay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayey Ilhaan Cumar ku sheegtay iney dadaal ku bixin doonto sidii ay isbaddal loogu sameyn lahaaa sharci 180 sano jiray oo aqalka wakiillada ee Koongareeska Mareykanka ka hor istaagaya iney galaan dadka uu madaxa u daboolanyahay iyo haweenka xijaabka xiran.
Ilhaan oo dhawaan loo doortay xildhibaannimada Koongareeska, oo ay ku mataleyso xisbiga Dimuqraaddiga Mareykanka, ayaa ah gabar muslim ah oo ka soo jeedda Soomaaliya labiskeedana uu ka mid yahay khamaarka madaxa lagu daboosho, balse waxaa jira xeer u yaalla aqalka ay ku biirtay oo ku qasbaya iney iyadoo madaxeeda qaawanyahay gasho golaha.
BBC-da ayey u sheegtay in shaqada ugu horreysa ee ay qabaneyso ay tahay sidii ay u badbaadin lahayd khamaarkeeda, taasna ay garab ku siiyeen siyaasiyiinta kale ee xisbigeeda saameynta leh.
"Sidaan ognahay Waddankan sharciyadiisa waxay oggolyihiin in qof walba uu diintiisa xor u ahaado laguna xushmeeyo, Marka aniga waxaan ahay qof muslim ah oo xijaab xirato, sharcigaanna waa muhiim inuu ii oggolaado inaan xijaabkeyga xirto shaqadeydana guto, Marki la i doortay waxaan ogaannay inuu jiray sharci igu adkeynaya inaan khamaarkeyga wato, marka waxaa fursad la ii siiyay inaan aniga noqda qofka horseedaya sidii sharcigaas loo baddali lahaa" ayey tiri Ilhaan.
Hir galinta sharcigan ayaa la filayaa in la guda galo isbuucyada soo socda, marka xildhibaannada loo dhaariyo xilalkooda, sida ay BBC-da u sheegtay Ilhaan.
"Waxaan rajeynayaa in gabdhaha muslimiinta ee aniga ka dib la soo dooran doono ay heli doonaan fursad ay xijaabkooda kula tagaan shaqadooda, dagaal kalena aysan u galin iney arrintaas hir galiyaan. Tusaale ayaan u noqon doonaa gabdhaha yar yar ee iskuullada dhigta.,Waxay ila tahay in gabdhahaas markii iyagoo xijaabka ku xiran iskuulka lagu foorjeeyo ay dhihi doonaan 'xijaabkeyga waxba haka sheegin sababtoo ah gabar xijaaban ayaa fadhisa Koongareeska, marka waxaan u maleynayaa inaan waddo fiican u furi doono ayna heli doonaan dhiirri galin".
Wax qabadka ay damacsantahay Ilhaan
Ilhaan Cumar oo aqalka Koongareeska u matasha Degmada 5aad ee gobolka Minasoota ayaa sheegtay iney qorsheyneyso holwo badan oo horumar lagu gaarsiinayo deegaanka ay ka soo jeeddo.
"Qorsheheenna aad ayuu u weynyahay. Degmada aniga aan matalo waa tan ay daganyihiin dadka ugu badan ee da'da yar. Marka waxaan ku dadaali doonnaa horumarka wax barashada iyo sidii ay iskuullada ku heli lahaayeen lacag ciyaalka wax lagu baro, waxaan isku dayeynaa in dhallinyarada jaamacadaha dhigta ay fursad u helaan iney sii wataan jaamacadohooda, deymo bandanna aan lagu yeelan. Sidoo kale waxaan ka shaqeyn doonnaa shaqo abuurista iyo dhismaha waddooyinka".
Muxuu yahay Qorshaha Ilhaan ee ku aaddan Muhaajiriinta Soomaalida?
Wareysiga ay Ilhaan siisay BBC-da ayey dhanka kale uga hadashay arrimaha ku saabsan dadka qaxootiga ah ee ka soo jeeda waaddamada uu mamnuucay Mareykanka, kuwaasoo ay ka mid tahay Soomaaliya.
"Waxaa kale oo aan ka shaqeyn doonnaa oo aan dadaal ku bixin doonnaa sidii sharci ahaan loo khafiifin lahaa xayiraadda dhanka safarrada ee lagu soo rogay dalalka ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Yemen, waxaana isku dayi doonnaa sidii ay dadka walaaleheenna ah ee waddamadaas dhibaatooyinka ku heystaan ay dalka Mareykanka ku soo gali lahaayeen".
Ilhaan Cumar ayaa xubinnimada Koongareeska loogu doortay doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka ka dhacday 6dii bishan Nofeembar, waxayna noqotay haweeneydii labaad ee Muslim ah oo abid ku biirtay aqalkaas.